Mogadishu Journal » Ka soo kabashada Virgil van Dijk ee dhaawaca ACL
Daafaca dhexe ee Liverpool Virgil van Dijk ayaa durbaba dib u bilaabay tababarka fudud ka dib dhaawicii ACL ee bishii hore, taasoo sare u qaaday suurtogalnimada uu ninka reer Holland u dhameystiri karo soo laabashadiisa isla markaana uu ku soo laaban karo garoonka Reds ka hor dhamaadka xilli ciyaareedkan.
Van Dijk ayaa ACL ka dillaacay jilibka midig sababtoo ah taxaddar la'aan iyo tartan halis ah oo ka yimid goolhayaha Everton Jordan Pickford intii lagu jiray kulankii Merseyside derby ee Goodison Park.
Waxa uu qalliin guuleystay ku galay London wax ka yar laba toddobaad ka dib, waxaana uu durbaba eegayaa marxaladda xigta ee dhaqancelintiisa.
Warbixin ka soo baxday Daily Mail ayaa sharraxaysa in Van Dijk uu hadda bilaabay hawl yar oo ka soo kabashada, taas oo ah tabo yar oo tababaro ah oo loogu talo galay inuu jidhkiisa ugu diyaariyo wejiga labaad ee aadka u daran ee dhaqan celinta
Ma cadda in Van Dijk uu ka soo hormaray waqtigii loo qabtay iyo in kale, laakiin soo kabsashadiisa ilaa iyo haatan iyo awoodiisa uu horey ugu soo qaatay nooc tababar ah ayaa calaamad u ah Liverpool.
Sidoo kale waa dhiirigelin muhiim u ah xulka qaranka Netherlands, oo doonaya inuu diyaar noqdo iyo inuu taam ahaansho buuxda helo waqtiga loogu talagalay Euro 2020, oo ah tartankoodii ugu horreeyay ee ugu weynaa tan iyo 2014.
Dhaawiciisa ka hor, Van Dijk shaqsi ahaan kuma uusan riyaaqin bilowgii ugu fiicnaa ee xilli ciyaareedkii 2020/21, xawaaraha uu ku socday maalintii furitaanka ee ay 4-3 kaga badiyeen Leeds isla markaana uu eed ku lahaa sida kooxda inteeda kale ceebtii 7-2 gacmaha Aston Villa. Intii uu maqnaa, Liverpool ayaa ku guuldareysatay inay shabaqeeda ilaashato Premier League, halka daafaca ay dhaawacyo dheeri ah la soo derseen.
Joogtada degdega ah ee Fabinho ayaa la filayaa inuu si dhaqso ah ugu soo laabto taam ahaanshihiisa, laakiin Joe Gomez ayaa seegi doona inta badan xilli ciyaareedka inta ka dhiman xilli ciyaareedka sababo la xiriira dhaawac soo gaaray jilibka intii lagu jiray tababarkii England ee usbuucii hore. Joel Matip wuu soo laabtay hada, laakiin 29 jirkaan ayaa heysta rikoor jimicsi oo jimicsi ah labadii xilli ciyaareed ee lasoo dhaafay, waxaana uu hore u seegay qeyb ka mid ah xilli ciyaareedkaan.
Rhys Williams, oo kasoo laabtay waajibaadka xulka England ee 21 jirada ayaa shaki laga qabaa, iyo Nathaniel Phillips ayaa ah daafacyada kale ee la aqoonsan yahay ee kooxda Liverpool, laakiin midkoodna khibrad badan ma leh.
Inkastoo ay jiraan arrimo daafac dhexe ah, Reds ayaan haatan dooneynin inay ku biiraan suuqa kala iibsiga bisha Janaayo. Daafac dhexe oo cusub ayaa diirada u saarnaa tan iyo markii uu iibiyey Dejan Lovren isaga oo aan badalin bishii July, laakiin qorshooyinka qorista ayaa loo maleynayaa inay diirada saari doonaan xagaaga.
Taasi waa isbadali kartaa oo keenista daafac dhexe ayaan meesha laga saarin - maamulka Anfield ayaa ku wargaliyay Jurgen Klopp inay diyaar u yihiin inay heshiis la galaan hadii ay macquul tahay dhaqaale - laakiin doorbidka haatan waa inuu sugaa ilaa dhamaadka xilli ciyaareedka.
Scouts-ku waxay raadinayeen Schalke's Ozan Kabak, Villarreal's Pau Torres, Shakhtar Donetsk's Mykola Matvienko, Sevilla's Jules Kounde iyo RB Leipzig's Dayot Upamecano tan iyo xagaagii iyagoo qiimeynaya fursadaha. Waxay raadinayaan waqti dheer mana doonayaan inay bixiyaan wax ka badan £ 40m.